Rehefa manana sakaiza ara-nofo ianao, dia mety hanjary ho sarotra ny fifandraisana ary noho ny antony maro. Ireto misy torohevitra 5 mba hiarovan-tena!
Iray ihany ny fanirianao: hiaina fifandraisana tsotra sy tsy mifandray. Na noho ianao nivoaka tamin'ny fisarahana sarotra na tsotra fotsiny satria tsy te hipetraka ianao dia nanapa-kevitra ny hanana namana firaisana. Ary raha nieritreritra ianao fa amin'ity karazana fifandraisana ity dia ho mora ny zava-drehetra, dia diso fanantenana ianao avy hatrany. Eny tokoa, afaka miala amin'ny tanana haingana izy io! Mety hanelingelina ny fahatsapana ny fahatsapana, ny vadinao dia mety hahatsapa ho mahery vaika amin'ny fifandraisanao ary dia izay. Ary raha azonao atao tsara ny mampijanona ny zava-drehetra raha tena mampalahelo anao ny toe-javatra, dia misy toro-hevitra 5 hamerenanao ny fifehezana amin'ny fifandraisanao amin'ny namanao manao firaisana.
Raha manomboka manafoana ny drafitrao amin'ny fotoana farany ilay olona eo alohanao, ary tara miseho ora maromaro, mandefa hafatra aminao na mandefa ny hozatrao aminao raha vao manana olana izy ireo. tonga ny fotoana angatahana fanajana. Satria na dia mbola tsy nampanantena ny tenanao na inona na inona aza ianao ary tsy ao anaty fifandraisana, ny manaja anao ihany no zavatra mamatotra anao. Mazava ho azy, manana fotoana mahafinaritra miaraka ianareo, saingy tsy manamarina ny fihetsika fetra izany. Na dia tsy manan-trosa aminao amin'ny fomba fijery ara-pientanam-po aza izy, dia tokony hanaja anao farafahakeliny izy. Tokony ho fantatrao tsara izany!
Lazao izay manelingelina anao
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny olona iray ifandraisanao amin'ny fomba ofisialy amin'ny sakaizanao sy ny sakaiza ara-nofo dia mazava ho azy fa ny fihetsem-po dia tsy natao ho antony iray. Ka tsy mila manaingo ny hevitrao ianao na misoroka ady mba tsy ho tezitra aminy. Mifanohitra amin'izany no izy fa ny marina dia tsy maintsy ho lohalaharana satria ny tanjon'ny fiarahanareo dia ny manararaotra feno fa tsy voafehin'ny ratsy. Raha misy zavatra manelingelina anao dia aza mitehin-tena samirery. Mazava ho azy fa aza masiaka na tsy manaja / tsy manaja fa ataovy mazava izay antenainao.
Milalaova ny karatra lavitra
Mba hahatonga ny olona iray hihetsika, namana manao firaisana na tsia, tsy misy tsara lavitra noho ny milalao ny karatra lavitra. Raha tena mikarakara ireo fivorianao izy dia mety ho gaga izy mahita anao bebe kokoa amin'ny tahiry. Raha mirona ho tena tia namana koa ianao, ny sisa ataonao dia ny mankafy milalao gilasy ary miandry. Ho hitanao fa tsy ho ela ny fanehoan-kevitra ary rehefa tonga izany, tsy maintsy mihazona sy misoroka ny famakiana ireo hafatra manahy voalohany isika. Miantehitra aminao izahay!
Avereno jerena ny safidinao
Indraindray, rehefa mahatsapa tena mahazo aina isika amin'ny fifandraisana, dia manadino fa afaka mijanona ny zava-drehetra raha misy manavesatra antsika. Eny tokoa, mendrika kokoa noho ny olona tsy manaja anao sy izany ianao, na dia sakaiza aza. Araka izany, manana fotoana rehetra ianao hihaonana amin'ny olon-kafa ohatra, mandany fotoana miaraka aminao na misotro zava-pisotro miaraka amin'ny namanao fa tsy mandany fotoana amin'ny olona itiavany azy. sarotra loatra. Tadidio fa tsy maty ianao.
Ekeo ny zavatra tsapanao
Nefa mazava ho azy, amin'ny alàlan'ny fiarahana mampiaraka amin'ny olona iray, dia afaka manomboka mahatsapa ho azy ireo ianao. Na dia napetraka hatramin'ny voalohany aza ny lalàna dia mijanona ho olombelona ambonin'ny zavatra rehetra ianao ary indrisy, tsy voafehy ny fahatsapana. Mety ho eo fotsiny ny olanao. Raha tsy ekenao ny elanelana, raha miandry hafatra ianao, raha te hizara fotoana tsy fanaovana firaisana aminy ianao, dia mety ho raiki-pitia aminy ianao / izy. Na ahoana na ahoana, ilaina ny fifanakalozan-kevitra tsara.
fifandraisanasakaiza manao firaisana
Resadresaka nifanaovana tamin'i Angelina Jolie - BBC Urdu - Video
Dj Arafat: Neny Tina, Carmen, Samuel Etoo ary ny fianakaviana rehetra tao amin'ny Residence of the Dj Arafat c morning - Video